राजाले मेरो सरकार भन्न पाउने राष्ट्रपतिले किन नपाउने ? – रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ श्रावण ६ सोमबार, ०५:५७
२०७६ बैशाख २१ गते प्रकाशित, l १२:१९
विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्द पटक–पटक प्रयोग गरिन् । यही शब्दका कारण नीति तथा कार्यक्रममाथिको प्रतिक्रिया पनि विषयान्तर भएको छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमको तार्किक बहस भइसकेको छैन । यद्यपी प्रारम्भिक टिप्पणी हेर्दा आलोचना सुरु भइसकेको छ । यि विषयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको राम्रो पक्ष केके छन् ?
नीति तथा कार्यक्रमको राम्रो पक्ष भनेको के हो भने अघिल्लो वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जोड दिइएको छ । त्यसैगरी पहिलाको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा पनि गरिएको छ । हामीले यो नयाँ थिती बसाल्न खोजेका छौँ । केही गेम चेन्जर कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । हामीले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भनेका थियौँ, त्यसमा यसपटक जग हाल्ने काम भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलगायतले अन्य दलले पनि सस्तो लोकप्रियताको पुलिन्दा भनेर टिप्पणी गरेका छन् नि ?
नेपाली कांग्रेसबाट त हामीले योभन्दा बढि अपेक्षा गरेकै थिएनौँ । उहाँहरुलाई त के भनेर आलोचना गरौँ भन्नेबाहेक अरु चिन्ता छैन । प्रतिपक्षको आलोचनात समान्य हो ।
डा. बाबुराम भट्टराईले पनि आलोचना गर्नुभयो नि ? सपनाको पुलिन्दा भन्नुभयो ।
उहाँले हाम्रो स्पिड समात्न सक्ने भएको भए त हाम्रै पार्टीमा आउनुहुन्थ्यो नि । त्यो नसकेर अर्को पार्टीमा जानुभएको डाक्टर साहेबका कुराको के टिप्पणी गर्नु ।
कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि आर्थिक पाटो कमजोर छ । कुनै आधार नै प्रस्तुत गरिएको छैन । कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
कार्यान्वयनमा शंका त जहिले पनि हुन्छ । पैसा मात्रै भएर मात्रै पनि हुँदैन । हामी अर्कमण्य भइदियौँ भने, व्यूरोक्रेकेसीले काम गरेन भने, अरु अन्यथा घटनाहरु घटे भने त लागु नहुन सक्छ नि ।
चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल हुन्छ ?
अहिले नै हामी झण्डै ८ प्रतिशतको नजिक छौँ । उदाहरणको लागि धौवादीको फलाम खानी उत्खनन गर्छौँ भनेका छौँ । उत्खननपछि विक्रिको तहमा आयो भने धेरै तलमाथि हुन सक्छ । यो अवधि भनेको निर्माणको अवधि हो । निर्माणमा जति खर्च गर्छौँ, त्यहीअनुसार जनशक्ति परिचालन हुन्छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ ।
पूर्व पश्चिन रेल निर्माणको सुरु गर्ने भनिएको छ । यो कसरी सम्भवन छ ? चिनबाट ल्याउने कि भारतबाट ?
पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रेल दौडाउने भनेर धेरै अगाडिदेखि अध्ययन गरेका थियौँ । डिपीआर तयार भइसकेको छ ।
एक वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम कसरी सम्भव छ ?
रोजगारीका धेरै सम्भावना छन् । सरकारी कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने काममा मात्रै एक लाख युवालाई रोजगारी दिन सक्छौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि लागु भएको छ । हामी बेरोजगारलाई भत्ता र काममध्ये एउटा जसरी पनि दिन्छाँै । रोजगारीका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई किन मेरो सरकार भन्न लगाइयो ?
हरेक देशका राष्ट्रप्रमुखले देशको सरकारलाई मेरो सरकार भन्छ । यसमा के आश्चर्य भयो र ? राजा हुँदा राजाले मेरो सरकार भन्थे, राष्ट्रपति हुँदा पनि मेरो सरकार भन्नुभयो । सक्किगो नि । कुरा नबुझेर आलोचना गरिएको हो । राष्ट्रपतिले ४२ पटक मेरो सरकार भन्नुभएको छ । त्यो भन्नलाई उपयुक्त नै थियो । तर कतिपय साथीहरुले राजा विर्सिनुभएको छैन । राष्ट्रपतिले गाडी चढेर आउँदा पनि राजा बन्न खोज्यो भन्नुहुन्छ । कसरी आउने त ? हिँडेर आउने ?
कांग्रेस सांसद गगन थापाले त राष्ट्रपति भण्डारी महारानी बन्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो नि ?
उहाँले गैरजिम्मेवार तर्क गर्नुभयो । सांसदले यस्तो गैरजिम्मेवार तर्क गर्नु राम्रो हुँदैन ।
विष्णु रिमालले फेरि भने : प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्नेहरु छौंडा नै हुन् (भिडियोसहित)
विष्णु रिमालको टुइटले हंगामा, कसलाई भने छौँडा ?
आफू भात खाएर डा. केसीलाई भोकै राख्ने कांग्रेसको एजेण्डा नै छैन : विष्णु रिमाल